एकादेशमा दुई साथी बस्थे । एउटा मच्छड र अर्को झिँगो । उनीहरू सधैँ सँगै बस्थे ।
उनीहरू सानैदेखि मिल्ने साथी थिए । उनीहरू मिलिमिली मान्छेका कोठामा जान्थे । मच्छड भने मान्छेको रगत चुस्दै बस्थ्यो । झिँगा भने फोहोरको रस खाँदै बस्थ्यो ।
एकदिन झिँगाले भन्यो "साथी, आज एकदिनको लागि हामी आफ्नो काम साटुम् न !"
"हुँदैन, साथी ! अचेल मान्छे धेरै बाठा भएर उल्का छ ! बचेर बस्छन् । कहिले काहीँ मात्रै टोक्न पाइन्छ । तै पनि तिम्रो त टोक्ने बानी पनि छैन । तिमी भोकै पर्न सक्छौ ! के तिमी नखाई बस्न सक्छौ, भन त?" यस्तै यस्तै कुरा भनेर मच्छडले झिँगालाई सम्झायो ।
कुरा मिल्यो । त्यो दिन मच्छड र झिंगाले आ-आफ्ना काम गरे ।
अर्को दिन फेरि झिँगाले काम साट्ने भन्यो । मच्छडले पनि तर्क राख्यो । एक छिन् झगडा पनि पर्यो । तर पछि सहमति भयो । दुवैले काम साट्न माने । त्यस दिनपछि उनीहरू एक अर्काको काम गर्न जाने भए ।
"तर त्यो हाम्रो छेउको मान्छेतिर चैँ नजाऊ है !" सम्झाउन खोज्दै मच्छडले भन्यो ।
झिँगालाई साथीको कुरा सुन्ने फुर्सद थिएन । के के न गर्न आँटेजस्तो गर्दै ऊ भुन्न उड्यो । उसले सोच्यो: बल्लबल्ल राम्ररी खान पाइएला भनेको साथीचैँ उल्टो र पाल्टो भन्छन् । मेरो मनपर्ने कुरामा ऊ जहिले पनि यस्तै गर्ने क्या ! नहुने कुरो !"
अर्कोतिर मच्छड आफ्नो साथीको चिन्ता गरिरहेको थियो । "साथीलाई के थाह होला र मान्छेहरू हामीजस्ता कीरा मार्नका लागि केके लिएर बस्छन् र हामीलाई प्याट्ट पार्छन् । मलाई त थाह छ र म यसबाट धेरैचोटि बचेको पनि छु तर बिचरा साथीलाई गाह्रो त पर्दै छैन, अब म के गरुम् ।"
मच्छड लामो सोचमा पर्यो । ऊ झिंगा भएतिर जाने भनेर हतारिंदै गयो । उता झिँगा मान्छे बसेको ठाउँमा पुगेर टोक्न थाल्यो । नुहाएर बसेको मान्छेको कमलो खुट्टामा चिरिक्क चिरिक्क पार्यो । अनि त्यो मान्छेले कीरा मार्ने ब्याट निकाल्यो र यता उता हिर्काउन थाल्यो ।
कोठा बन्द थियो । केही कपडा झुण्ड्याएको थियो र त्यतैतिर लुक्तै झिंगा यता र उता उडिरह्यो ! कुनै बेला त उसलाई डर पनि लाग्न थाल्यो । आखिरी ज्यानको माया न हो ! एक ठाउँ बसेर साथीलाई सम्झिनमात्र के थालेको थियो, जालीजस्तो के आएर उसलाई थिच्यो । त्यसैले उसको परान गयो ।
अलिपछि मच्छड त्यहाँ पुगेर हेर्दा आफ्नो साथी मरेको देख्यो । अरूका कुरामा चाहिनेभन्दा धेरै लोभ गर्दा र काममा बुद्धि नपुर्याउँदा साथीको ज्यान गएको उसले बुझ्यो । अनि दुख मान्दै आफ्नो कामतिर लाग्यो ।
प्रकाशित १८ जेठ २0७७ , आइतबार | 2020-05-31 09:41:01